Zvikamu zveSpanish stock market | Ehupfumi Zvemari
Usati wavhura zvigaro mumisika yequity, zvichave zvakakosha kuti iwe unyatso ziva nezve zvikamu zvinozochengeterwa mari yako. Nekuti iwe haugone kukanganwa kuti maitiro avo akasiyana zvakajeka kubva kune mumwe nemumwe. Nemisiyano mumakotesheni ayo anogona kusvika pamatanho anosvika ku3%. Ichi ndicho chimwe chezvikonzero nei zvichikosha kwazvo kusarudza zvikamu zvepamusika zvepamusika nguva dzose. Pamusoro pezvimwe zvigadzirwa zvehunyanzvi.
Izvo hazvina kukodzera chete kugadzirisa iyo investimenti sarudzo yakanaka yehunokosha, asiwo yeiyo chikamu icho chairi. Iri zano rinofanirwa kuitwa pamwechete kuti ribudirire. Mupfungwa iyi, usakanganwa kuti kunenge kusamboita shanduko yezvikamu zvese zvemusika wemasheya zvinogara zvakafanana. Nekuti yega yega inotongwa nenzira dzakasiyana uye kuti iwo ane misiyano inofambiswa nedzimwe musiyano. Zvekuti nenzira iyi, mitengo yavo inogona kuumbwa zvinoenderana nemutemo uye kupihwa.
Kuita kuti basa iri rive nyore zvishoma kwauri, tiri kuzokufumura kune mamwe akakosha zvikamu zvedanho renyika. Varipi vamwe vevaya inonyanya kukanganisa index inosarudzwa yemusika wekuSpain wemusika, iyo Ibex 35. Iwo mabhanga uye ekuvaka zvikamu ndizvo zvine simba uye zvine simba rakakura kupfuura mune mamwe maEuropean stock stock. Hazvishamisi kuti huremu hwayo hwakakura kupfuura 35% uye shanduko yayo inoitisa kuti hutu hukwire kana kuwira pane imwe nguva.
1 Masoko emusika wemasheya: mabhangi
2 Chikamu chekuvaka
3 Makambani emagetsi
4 Telecos: nevamiriri vashoma
5 Chikamu chakasiyana-siyana chekushanya
6 Inishuwarenzi mumwe chete paIbex 35
Masoko emusika wemasheya: mabhangi
Chikamu chebhengi chikamu chakanakisa chemari sezvo kuvapo kwayo kuchitora kutarisisa kwechikamu chakanaka chevashambadzi vadiki nepakati. Nebasa rakakura mukutsinhana kwekuchengetedzeka munzvimbo dzese dzekutengesa uye dzinoona shanduko chaiyo yesarudzo inosarudzika yemusika weSpanish wemusika. Nemaitiro ekukosha kwe BBVA, Santander, Sabadell kana Bankinter. Mazhinji acho akabatanidzwa kunge machipisi ebhuruu emisika yezvemari uye aine huwandu hukuru hwezvibvumirano. Sezvo ivo vachizivikanwa nekuve akanyorova tsika.
Imwe yeakakura mareferenzi ekuita mashandiro mumisika yenyika yedu. Kune rimwe divi, hazvigone kukanganwika kuti ndeimwe yemasokisi emasheya akayemura zvakanyanya mumakore makumi matatu apfuura nekuda kwekutonga kwezvidhina muhupfumi hweSpain. Kune rimwe divi, iri chikamu chekuenzana nevamiriri vazhinji. Nemaitiro ekukosha kwe ACS, Ferrovial, Acciona kana Colonial. Nekuti makambani ezvivakwa senge yekupedzisira aripowo. Muzviitiko zvese, iwo makambani makuru kwazvo emari anogamuchira mashandiro evashambadzi vadiki nepakati.
Iyo ndeimwe yeakanyanya akakosha zvikamu zveSpanish equities. Iko kwavanoshanda seyakachengeteka nzvimbo yekutarisana nepo pakatarisana nekusagadzikana zviitiko mumisika yemari. Imwe yemipiro yake mikuru ndeyekuti ipa chikamu chemubhadharo imwe yepamusoro-soro mumisika. Iine avhareji purofiti yegore rose yekutenderedza 6%. Chii chinogadzirisa aya maratidziro senge zano rekutanga kuita portfolio yemari yakatarwa mukati memusiyano. Kuve varimi vanochengetedza zvakanyanya vanonyanya kunetseka kuita mashandiro avo mumisika yemari. Kuzvigadzirisa pachayo mune imwe yenzvimbo dzetsika kwemakore mazhinji. Nemazita asingaverengeki anotengeswa mazuva ese. Iine vamiririri vechimiro cheEndesa, Iberdrola kana Naturgy.
Telecos: nevamiriri vashoma
Chikamu chakakosha asi chakashomeka muzvikamu zveSpain. Nenhengo mbiri chete paIbex 35, kune rumwe rutivi, imwe yeanonyanya kukodzera machira ebhuruu eiyi index index, senge Telefónica. Uye kune rimwe divi, iyo nyowani yekuchengetedzwa kweCellnex, iyo isati yanyorwa pamisika kwenguva pfupi uye kubva kune izvo zvinhu zvakawanda zvakanaka zvinotarisirwa kubva kuvadiki vepakati nepakati. Chero zvazvingaitika, huremu hwese hunotakurwa neanongedzera opareta mukufona, iyo ine imwe yematanho akasarudzika mukati memusika wesitoko wenyika Haisi chikamu chezvemafoni senge mune dzimwe nyika munharaunda medu nekuda kwekushomeka kwemakambani akanyorwa muchipo chavanotangisa kune vatengesi. Chikamu, muchidimbu, mune inononoka asi inofambira mberi kudzikira kubva kune ese maonero maonero
Chikamu chakasiyana-siyana chekushanya
Iyo indasitiri yekutanga munyika medu haisi kumiririra mumisika yezvemari sezvo ichifanira kuzviisa pachezvayo. Kune rimwe ruoko, pane ketani Sol Meliá inomiririra pekugara uye mahotera, nepo IAG iri sosi yekureva mukati mechikamu chemitsetse yemhepo. Kune rimwe divi, Amadeus anofanirwawo kujekeswa mukushambadzira kwezvigadzirwa zvekushanya nemasevhisi. Asi zvishoma zvimwe, zvinopesana nechinzvimbo chinogadzirwa nekushanya kuSpain kwemakore mazhinji ikozvino uye chiri chipo chisinga gutsikane zvachose kune zvido zvechikamu chikuru chevashambadzi vadiki nepakati. Kunyangwe mune zvese izvi zviitiko, nevhoriyamu yekutora iyo inofanirwa kuverengerwa seinogamuchirwa.
Inishuwarenzi mumwe chete paIbex 35
Mune ino runyorwa hatigone kufuratira iro basa rinoitwa nemakambani einishuwarenzi mukirasi ino yemisika yemasheya. Kunyangwe ichikosha kwazvo, tinogona chete kuwana Mapfre pakati pemakambani makumi matatu neshanu nyika inosarudza index. Uye zvakare, iko kuchengetedzeka kwave kurasika kukosha zvishoma nezvishoma nekuda kwemazita mashoma akanyoreswa muchikamu chega chega chekutengesa. Kusiyana nedzimwe nyika mukondinendi yekare, umo makambani einishuwarenzi chikamu chimwe chezvakanyanya kukosha. Semuenzaniso kuGerman neFrance uko kune vakawanda veinishuwarenzi vakanyorwa uye vese vane huwandu hukuru hwekutaurirana. Icho chikamu chisina kuyerwa muSpain.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Zvigadzirwa zvemari » Zvikamu zveSpanish stock market
Ndezvipi zviri online zvikwereti uye nguva yekushandisa?